Ny fahalalana an'i Jesosy Kristy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Betsaka ny olona mahalala ny anaran'i Jesosy ary mahafantatra betsaka momba ny fiainany. Mankalaza ny nahaterahany izy ireo ary mankalaza ny fahafatesany. Saingy lalina kokoa ny fahalalana ny Zanak'Andriamanitra. Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, dia nivavaka ho an'ny mpanara-dia azy i Jesosy hamonjy izany fahalalana izany: "Fa izao no fiainana mandrakizay ahafantarana azy ireo, ilay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay nirahanao." (Jaona 17,3).
I Paoly dia nanoratra izao manaraka izao momba ny fahalalana an'i Kristy: "Fa ny tombony azo ho ahy dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'i Kristy; eny, izao kosa dia ataoko fa manimba ny zavatra rehetra noho ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko, Tompoko, Izay nahatonga ny foko tsy ho zavatra. ary ataoko fa fako izy mba hahazoako an'i Kristy " (Filipiana 3,7–8).
Ho an'i Paul, ny fahalalana an'i Kristy dia momba ny tena ilaina, ny zavatra hafa rehetra tsy misy dikany, ny zavatra hafa rehetra izay noheverina ho fako, toy ny fako nariana. Moa ve ny fahalalana an'i Kristy dia zava-dehibe tokoa amintsika toa an'i Paoly? Ahoana no hahazoantsika azy? Ahoana no ilazany izany?
Io fahalalana io dia tsy zavatra iray izay ao an-tsaintsika akory, fa mandray anjara mivantana amin'ny fiainan'i Kristy, fiarahana mitombo hatrany amin'Andriamanitra sy ny zanany lahy Jesoa Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Lasa iray ihany Andriamanitra sy Zanany. Tsy omen'Andriamanitra antsika izany fahalalana izany, fa nomeny tsirairay. Tiany hamboly fahasoavana sy fahalalana isika. (2. Pet. 3,18).
Misy lafiny telo amin'ny traikefa mahatonga antsika hitombo: ny tavan'i Jesosy, ny Tenin'Andriamanitra ary ny fanompoana ary ny fijaliana.
1. Mitombo eo amin'ny tavan'i Jesosy
Raha te hahalala zavatra marina isika dia mandinika azy io. Mandinika sy mandinika isika raha afaka mandray tsoakevitra. Raha te hahalala olona iray isika, dia tena mibanjina indrindra amin'ny tarehy. Toy izany koa i Jesosy. Hitanao be dia be izy sy Andriamanitra eo imason'i Jesosy! Ny fantatsika ny tarehin'i Jesosy no tena ao am-pontsika.
I Paoly dia nanoratra momba ny "maso nohazavaina fo" (Efesiana 1,18:2) iza no afaka mahita an'io sary io. Izay jerentsika fatratra dia hisy heriny koa eo amintsika, izay jerentsika amin'ny fanolorantena tena hovana isika. Andininy roa ao amin'ny Baiboly no manondro izao: "Fa Andriamanitra, Izay niantso ny mazava hamirapiratra avy amin'ny maizina, dia nampahazava ny fonay koa ho fahazavana amin'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy" (4,6 Korintiana).
"Fa isika rehetra dia maneho ny voninahitry ny Tompo amin'ny tarehy tsy voatanisa ary ovaina ho mitovy endrika, avy amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra, dia amin'ny alàlan'ny Fanahin'ny Tompo" (2 Korintiana 3,18).
Ny mason'ny fo no mamela antsika hahita ny tavan'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra ary hahita zavatra ho voninahitr'Andriamanitra isika. Taratra eto amintsika izany voninahitra izany ary manova antsika ho sarin'ny zanakalahy.
Tahaka ny fikatsahantsika fahalalana eo amin'ny tavan'i Kristy, dia miova ho endriny isika! "Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, mba hiorina amin'ny fitiavana ianareo, ka hofantarina amin'ny olona masina rehetra ny sakany, ny lavany, ny hahavony sy ny halaliny ary hahafantaranao ny fitiavan'i Kristy, izy rehetra Miampita ny fahalalana, ka ho feno ny fahafenoan'Andriamanitra ianao. Andao isika izao hitodika any amin'ny faritra faharoa amin'ny traikefa amin'ny fitomboan'ny fahasoavana sy ny fahalalana, ny Tenin'Andriamanitra. Izay fantatsika sy azontsika fantarina momba an'i Kristy, dia efa niainantsika tamin'ny teniny " (Efesiana 3,17: 19).
2. Andriamanitra sy Jesosy dia manambara ny tenany amin'ny alàlan'ny Baiboly.
«Mampita ny tenany amin'ny teniny ny Tompo. Izay manoratra ny teniny dia mandray azy. Izay mitoetra ny teniny dia tsy mijanona. Ary izay mitandrina ny teniny dia mitoetra ao aminy. Androany, rehefa mitady fahalalana na mila fiaraha-monina ny olona dia tsy azo hamafisina tsara izany raha tsy misy ny fanarahana ny fepetra amin'ny teniny. Ny fahalalana ara-pahasalamana momba an'i Kristy dia mifamatotra amin'ny tenin'ny Tompo mahasalama. Ireny ihany dia mitondra finoana matanjaka. Izany no antony nilazan'i Paoly tamin'i Timoty hoe: «Tazony mafy ilay sary (Modely) teny mahasalama » (2 Timoty 1:13). (Fritz Binde «Ny fahalavorariana ny Vatan'i Kristy» pejy 53)
Miaraka amin'Andriamanitra, ny teny dia "tsy" fotsiny, velona sy mahomby. Mivoatra tanjaka lehibe izy ireo ary loharanon'aina. Ny Tenin’Andriamanitra dia te-hampisaraka antsika amin’ny ratsy ary hanadio ny saintsika sy ny saintsika. Reraka ity fanadiovana ity, tokony hiambina hatrany ny saintsika ara-nofo miaraka amin'ny basy mavesatra.
Hodinihintsika izay nosoratan'i Paoly momba izany: "Satria tsy fanatanjahana ny fitaovam-piadian'ny mariazantsika, fa mahery an'Andriamani- tra handrava trano mimanda, ka afaka misaintsaina Ny fanapotehana (famoizam-po) sy ny fitrandrahana ny haavony rehetra izay manohitra ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fahazoana ny eritreritra rehetra ho fankatoavana an'i Kristy, dia vonona hamaly izay tsy fankatoavana ihany koa rehefa vita ny fankatoavanao. (2 Korintiana 10,4: 6).
Ity fankatoavana izay noresahin'i Paoly teo ity dia ampahany lehibe amin'ny fanadiovana. Miara-mandeha ny fanadiovana sy ny fahalalana. Azontsika atao ny mamantatra ny fahalotoana eo amin'ny fahazavan'i Jesosy ary mila manaisotra azy isika: "Raha asehon'ny fanahin'Andriamnitra ho fahalemena na zavatra tsy eken'Andriamanitra, dia antsoina hoe asa isika! Ilaina ny fankatoavana. Tian'Andriamanitra ny fahalalana izany Tsapa amin'ny fiovana an'Andriamanitra. Raha tsy misy ny fiovana marina, ny zava-drehetra dia miorina foana, ny fahalalana an'i Kristy tsy matotra dia malazo " (2 Korintiana 7,1).
3. Mitombo amin'ny serivisy sy ny fijaliana
Rehefa mijery sy mizaka ny fanompoana an'i Jesosy tamintsika sy ny fijaliany ho antsika fa ny fijalian'ny olombelona sy ny fanompoana an'ny hafa dia misy dikany. Ny fanompoana sy ny fijaliana no loharano tsara hahalalanao an'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny serivisy dia fandalovan'ny fanomezana voaray. Toy izany no manompo an'i Jesosy, ampandehanany ny azony tamin'ny Ray. Izany no tokony ho fahitantsika ny fanompoantsika ao amin'ny fiangonana. Ny fanompoana izay ataon'i Jesôsy no modely ho antsika rehetra.
"Ary nomeny ny sasany ny apôstôly, ny sasany ho an'ny mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ny sasany ho an'ny mpiandry sy ny mpampianatra hanome fitaovana ny olomasina ho amin'ny asa fanompoana, ho fananganana ny tenan'i Kristy, mandra-piraisan'ny finoana rehetra sy ny fahalalana ny Zanak 'Andriamanitra " (Efesiana 4,11).
Amin'ny alàlan'ny fanompoana miaraka, apetraka amin'ny toerana mety sy mety amin'ny tenan'i Jesosy isika. Nefa izy amin'ny maha-lohany no mitarika ny zava-drehetra. Ny lohany dia mampiasa fanomezana isan-karazany ao am-piangonana amin'ny fomba iray hamoahana firaisana sy fahalalana. Ny fahalalana ny Zanak'Andriamanitra dia tsy vitan'ny hoe mitombo ny tena manokana, fa koa ny fitomboan'ny vondrona. Ny asa ao amin'ilay vondrona dia samihafa, ary misy lafiny iray hafa amin'ny fanompoana ny hafa izay mitondra amin'ny fitomboan'ny fahalalana an'i Kristy. Raha misy ny serivisy, misy ny fijaliana.
"Ny serivisy miara-miasa toy izany dia mitondra fahoriana, amin'ny olona manokana sy ho an'ny hafa ary ho an'ny hafa. Ireo izay te hisoroka io fijaliana triple io dia tsy isalasalana fa hiharan'ny fatiantoka mitombo. Tsy maintsy miaina fizaram-pahoriana manokana isika satria tsy maintsy mamoy ny aintsika feno fahafaham-po amin'ny hazofijaliana sy maty ary alevina miaraka amin'i Kristy. Rehefa mitombo ao anaty antsika ilay Nitsangana, dia fandavana izany ny fandàvana ny tena. (Fritz Binde "Ny fahatanterahan'ny Vatan'i Kristy" pejy 63).
"Fa tiako ho fantatrao ny tolona lehibe ananako ho anao sy ho an'ireo any Laodicea sy ho an'izay tsy mbola nahita ahy amin'ny nofo ka ny fony no amporisihany, hiray amin'ny fitiavana ary manankarena amin'ny fahatokisana tanteraka. ho fahalalana ny zava-miafina an ’Andriamanitra, dia i Kristy, izay nafenin’ny harena sy ny fahalalana rehetra” (Kolosiana 2,1: 3).